Amazon laghachiri na ọgụ na Amazon Fire 8 HD mbadamba | Gam akporosis
Rafa Rodriguez Ballesteros | | Noticias, Mbadamba gam akporo
Lọ ọrụ mbadamba nkume ka dị ndụ. Ọ bụ ezie na ọ bụ akụkụ siri ike nke ahịa ahụ, a ka nwere ọtụtụ ụlọ ọrụ na-aga n'ihu na-enye ngwaahịa ọhụrụ kwa afọ. Amazon weghachitere nsụgharị ọhụrụ nke mbadamba ya nwere ike ịnweta, Amazon Fire 8 HD version 2020. O na-alaghachi n’inye ngwaahịa nwere ezigbo mma na ọnụ ahịa nwere ezi uche.
O doro anya, n'agbanyeghị onye ọ dị arọ, na N'ime mbadamba nkume, e nwere onye nrụpụta nke na-enweghị onye na-ama ya aka, ọ bụkwa Apple, ha bụ iPads ha. N'agbanyeghị nke ahụ, dị ka anyị si mara, mbadamba nwee ndụ ogologo oge karị karịa ekwentị. Ya mere, ọ na-esiri onye na-esiri ike ike ịkọwapụta ya karịa ndị ọzọ na ahịa, n'ihi na mbadamba nkume dị nnọọ mma karịa ekwentị.
Amazon Fire 8 HD, inweta na vasatail
Mmeghari ohuru nke Amazon 8 inch mbadamba na-eme ya dị ike karị na ndị ọzọ kwurula ya na oganihu di iche-iche. N'ezie, na-enweghị ọnụahịa ya karịrị 100 euro. Atụmatụ dị mma nke na-atụgharị Fire 8 HD 2020 ka ọ bụrụ a nnọọ inweta na-akpali ngwaahịa. Ọ dịghị elu chọrọ, a mbadamba ọ ga-arụ ọrụ anyị zuru oke iji gụọ netwọkụ mmekọrịta anyị, lelee vidiyo na YouTube, usoro na Netflix ma na-agagharị mgbe niile. Ọ bụghị ezigbo ngwaahịa maka iji ọkachamara na mmemme mmemme na-ebu arọ, mana maka ọrụ ndị ọzọ niile zuru oke.
Ọhụrụ Fire 8 HD na-egosipụta a 4-isi processor na-arụ ọrụ na 2 GHz. Nwere a 2GB Ram na ikike nchekwa kedu akụkụ nke 32 GB na-ekwe omume nke mmeba na kaadị micro SD ebe nchekwa. Na ngalaba nke nnwere onwe ha mma site na 20% na mmekọrita ya na mbụ version na nkwa ruo 12 awa nke na-aga n'ihu ojiji. Anyị na-achọta Igwefoto n'ihu na n'azụ na mkpebi nke 2 mpx.
Anyị nwere ike ikwu maka uru ndị ọzọ njikọta. Ọ nwere Bluetooth 5.0 na WiFi 802.11 ac. Gị ụgwọ njikọ na-abịa na Typedị USB Type-C, ihe anyị masịrị anyị nke ukwuu. Ọzọkwa nwere Otu ụzọ okwu si na mpụga, ezigbo maka iji ọdịnaya ọdịnaya, ma jikwaa ya 3,5mm mini Jack nkwụnye. O doro anya na ngwaahịa na-atọ ụtọ, nke nwere ike ịnweta ma zuru oke maka iji ya kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Amazon laghachiri na ọgụ na Amazon Fire 8 HD mbadamba